Pet Paw Ntu Clipeer Manufacturers & Suppliers | China Pet wkwụ Ntu Clipeer Factory
Ugboro abụọ kwadoro Pet ahịhịa
Emecha Pet Comb
Igwe anaghị agba nchara Pet mbo
Ngwa Ngwá Ọrụ
Pet Paw Ntu Clipeer
Nkịta Paw Cleaner
Ntu nrgwe nri
Pet Ntu Clippers
Pet ntu ntu
Nkịta nkịta olu njikota leashes
Uwe Mitts Massage Ngwá Ọrụ
Grooming uwe Mitts
Agehịa aka n'ahụ Ngwá Ọrụ
Pet Nha nha
Nchekwa nha nha Descaler
Pet Scissor Set
Pet Bowl Nri
Karama Mmiri Pet
Mkparịta ụka mmekọrịta ụmụaka
Akpa Ekpere Nkịta
Pet Ntughari ntutu
Waste akpa akpa
Omenala Nrụgide oru Retractab ...
Onwe nhicha Slicker ahịhịa ...
Nrụgide oru akpọ Retractable Dog ...
Dog Waste akpa njide
Nkịta Poop Bag Dispenser
Pet ntu ntu bụ n'enweghị nsogbu na-adị mfe na-enweta a ezigbo okokụre ntu na Diamond onu. Obere kristal ndị agbakwunyere na nickel na-ebu mbọ mbọ mbọ anụ ụlọ ngwa ngwa. Ngwongwo ihe eji eme anu ulo na-adizi ntu.
Faịlị anụ ụlọ ahụ nwere nkasi obi dị mma yana ijidesi ike.
Cat mboanuohia ntu mkpagide
1. A na-eji akwa igwe anaghị acha anwụrụ ọkụ nke pusi a na-eme mkpụmkpụ a na-adịgide adịgide, ọ dị ike iji belata mbọ nke pusi gị naanị otu ịkpụ.
2. Onye pusi mbo mpekere ntu mkpịsị aka nwere a nchekwa mkpọchi nke na-eme ka ị zere ihe ize ndụ nke ihe mberede mmerụ ahụ.
3. The cat mboanuohia ntu ntu mkpagide atụmatụ nke ọma, mfe adịgide, na-abụghị ileghara, ergonomic ịlesụ nke na-anọ n'enweghị nsogbu na aka gị.
4. Anyị ìhè na kemfe pusi mboanuohia ntu mkpịsị aka e mere maka obere ụmụ anụmanụ. Ọzọkwa, ọ ga-adị mfe iburu ebe ọ bụla ị na-aga.
Pet ntu ntu bụ n'enweghị nsogbu na-adị mfe na-enweta a ezigbo okokụre ntu na Diamond onu. Obere kristal ndị agbakwunyere na nickel ngwa ngwa na-edebe anụ ụlọ''ejula. Ngwongwo ihe eji eme anu ulo na-adi ntu.
Igwe anaghị agba nchara cat ntu trimmer
Mgbuji pupụtara na nka anyị cat ntu mkpagide na-mere nke siri ike igwe anaghị agba nchara iji hụ na ha na-adịgide adịgide & reusable maka afọ na-abịa.
Igwe anaghị agba nchara cat ntu mkpụbelata na-ekike na rubberized ị thatụ na-egbochi ukwu mgbe ị na-ewepụtụ.
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara na-edozi edozi igwe anaghị agba nchara nchara mbọ, ha dịkwa mkpa maka ndị nkịta na pusi. Jiri obere igwe eji agba nchara nchara iji mee ka mbọ anụ ahụ gị dị mma.
Obere Oke Ntu Mpekere
A na-ahazi ihe nhicha ahụ anyị ji ebu ibu na obere anụmanụ, dịka obere nkịta, nwamba na oke bekee.
Obere pusi ntu mkpịsị aka mee nke igwe anaghị ata nchara ya mere na ọ bụ hypoallergenic na inogide.
Obere pusi ntu mkpịsị aka aka na-okokụre na a ileghara-àmà mkpuchi, Ọ na-enye gị ohere na ntukwasi-obi na nkasi obi jidere ha iji gbochie ihe mgbu na-egbu mgbu.
Ọkachamara pusi ntu scissor
A na-ejizi agụba eji ejizi agụba emezi ihe na-enweghị atụ. Ga-enwe ike ihu ihe ị na - eme ma nyere gị aka ikpebi ego ole ị chọrọ, ọ na - ezere ọgbaghara ọgbụgba ọbara ọbụlagodi na - enweghị ihe mmetụta ngwa ngwa.
The ọkachamara cat ntu scissor atụmatụ ala na-abụghị ileghara ejiri Ọ ana achi achi nke ojiji nke na-egbochi ọghọm Nicks na he.
Iji ọkachamara a cat ntu scissor na ewepụtụ gị obere onye mbọ, mbọ, ọ bụ n'enweghị ihe na ọrụ aka.
Adreesị:No.8 Nanguandu ụzọ, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu China